Hackathon InterUniversitaire 2019
Fizotran'ny Hackathon InterUniversitaire 2019
Ny hackathon interUniversitaire 2019 na ny HIU_2K19 dia ho tanterahina ny andron'ny 30 - 31 Martsa 2019 , hivoaka roa volana mialoha ny laza adina ary samy miketrika ny azy avokoa ny sekoly rehetra mpandray anjara.Ny fisoratana anarana dia misokatra ny volana janoary iray manontolo hoan'ny sekoly rehetra misehatra eo amin'ny "informatique " sy "Mathématiques" tsy ankanavaka eran'ny Madagasikara.
Manana roa (2) volana ny sekoly tsirairay hanamboarany ny projet-ny , izany hoe ny volana febroary sy Martsa izany , fa ny andron'ny 30 - 31 Martsa kosa dia fanehoana ho hitan'ny rehetra no atao aty Antananarivo.
Fitsipika mifehy ny Hackathon InterUniversitaire 2019
I - Fandraisana anjara
Groupe roa isakin'ny Sekoly na Université ihany no afaka mandray anjara
Ny groupe iray dia misy ekipa telo(3) farafaha-keliny ary dimy (5) farafaha-betsany
Ny mpandray anjara dia tsy maintsy mpianatra avy ao amin'ny Sekoly na Université amin'ity taona 2019 ity ary mitondra taratasy fanamarinana avy amin'ny Sekoly na Université ny mpandray anjara rehetra
Ny fandraisana anjara dia dimy arivo ariary (5000Ar) isan'olona ary aloha mandritra ny fisoratana anarana
Ny mpandray anjara dia samy mitondra ny fitaovam-pihinanany avy
Ny sakafo dia iantohan'ny Techzara fa kosa milaza mialoha izay misy sakafo tsy zaka na fady
II - Fanehoana ny projets
Ny tolakandron'ny lahady 31 Martsa manomboka amin'ny iray ora ny fanehoana ny vokatra nataon'ny sekoly tsirairay
Folo minitra (10min) isakin'ny sekoly ny fanehoana
Ny lahady maraina dia samy manomana ny fanehoany ny zava-bitany ny sekoly rehetra
Tsy azon'ny daholobe hatrehina sy hivezivezena ny toerana misy ny mpandray anjara afa-tsy ny andron'ny 31Mars hariva amin'ny fotoanan'ny fanehoana ny zava-bitan'ny sekoly tsirairay
III - Zon'ny Sekoly na Université tsirairay
Ny zava-bitan'ny Sekoly na Université dia alefa ho projet OpenSource ao amin'ny Github aorian'ny fanehoana saingy azy.
Manana zo ny Sekoly na Université hanome licence miaro ny zava-bitan'izy ireo mba tsy hisy hanao dika mitovy
Ny Sekoly na Université raha misy tatitra na kihana dia tokony ho tonga mialoha ny famoahanan'ny mpitsara ny vokatra , aorian'izay dia tsy manankery intsony ny tatitra hafa rehetra.
IV - Fitsarana ny projets
Manana isa 100 avy eo ampiaingana ny Sekoly na Université tsirairay , ireto avy ny hitsarana azy :
Design et aspect téchniques
Ny mety ho fanontaniana ???
1 - Maninona no omena roa volana mialoha ny sujet ?
Ny antony dia mba ho zavatra mivaingana sy efa vita no asehon'ny sekoly tsirairay , satria tsapa fa nandritra izay hackathon notanterahina rehetra izay dia prototype fotsiny ihany no vitan'ny mpandray anjara ary matetika tsy misy tohiny.
2 - Inona no atao aty Tanà mandritra ny 30 - 31 Mars ?
Ny andron'ny 30 mars dia toy izao ny fandahara-potoana.
Fandraisana ny mpandray anjara rehetra
Fifampizarana traikefa entin'ny Sekoly na univérsité tsirairay avy
Conférences ny hariva
Atelier ny mamarana azy ary matory maka aina daholo ny mpandray anjara rehetra
Ny andron'ny 31 mars kosa dia toy izao ny fandahara-potoana.
Fanomanan'ny sekoly rehetra ny fanehoany ny zava-bitany
Amin'ny iray ora no manomboka ny fanehoana
Famoahana ny vokatra
3 - Ahoana izahay avy aty amin'ny faritra amin'ny fitaterana ?
Hatreto aloha dia manao izay hahatongavana aty Antananarivo ny avy any amin'ny faritra rehetra , raha misy kosa anefa ny fiovana dia lazainay eo ihany ianareo mahakasika ny fitaterana sy ny fivantanana aty Antananarivo.
4 - Aiza ny toerana hanaovana ny HIU_2K19 ary inona ny loka ?
Lazaina eto ihany.
4 - Raha misy groupe maro samy te handray anjara ao amin'ny sekoly na université iray ?
Raha misy izany dia anjaran'ny sekoly na ilay université ny manapaka izay ankizy alefany.
5 - Aiza ny sujet ?
Mivoaka eto miaraka amin'ny loka sy ny toerana ny faran'ny volana Janoary.
5 - Aiza ny misoratra anarana ?
Alefa email ato ny anarana feno an'ny ekipa rehetra , miaraka amin'ny sekoly niaviana techzara.mada@gmail.com.
Raha te hiara-hiasa aminay ianao dia mandefasa mail any amin'ny techzara.mada@gmail.com